Cibaadada ama sanam caabudista, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Dadka qaarkiis, falanqaynta aragtida adduunku waxay u egtahay mid cilmi-baaris dheeri ah iyo wax-soo-saar - aad uga fog nolol-maalmeedka. Laakiin kuwa raba inay ku noolaadaan nolol Masiixa loogu beddelay Ruuxa Quduuska ah, waxyaabo yar ayaa muhiim ah oo saameyn qoto dheer ku leh nolosha dhabta ah. Aragtidayada adduunyadu waxay go’aamisaa sida aan u aragno dhammaan noocyada mowduucyada - Ilaahey, siyaasada, runta, waxbarashadda, ilmo soo rididda, guurka, deegaanka, dhaqanka, jinsiga, dhaqaalaha, waxa loola jeedo in qofku noqdo, asalka aduunyada - in la xuso in yar.
Buuggiisa New Testament iyo Dadka Eebbe, NT Wright wuxuu ka faalloodaa arrimaha soo socda: “Wareysiyada adduunku waa aasaaska jiritaanka aadanaha, oo ah muraayadda adduunka lagu arko, qaab-dhismeedka sida lagu arkay Waxay ku qasban yihiin inay ku noolaadaan, oo waxkastaba waxay ku xirayaan aqoonsi iyo waddaniyad dareen u saamaxeysa dadka inay noqdaan waxay yihiin, iyagoo iska dhego tiraya aragtiyaha adduunka, ama dhaqankooda ama dhaqanka kale ee aan baranayno, ayaa noqonaya mid horseed superficiality aan caadi aheyn " (Bogga 124).
Hanuuninta aragtidayada adduunka
Haddii aragtidayada adduunkeena iyo dareenkeenna laxiriira aqoonsiga ay ka sii janjeedho dunidu marka loo eego Masiixa-xudunta u ah, tani waxay inaga inaga fogeysaa habka fikirka Masiixa qaab ama mid kale. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah inaan garowno oo aan ula dhaqanno dhammaan dhinacyada aragtida adduunkeena ee aan ku hoos jirin xukunka Masiixa.
Waa culeys in la waafajiyo aragtidayada adduunka si aad iyo aad u badan Masiixa, maxaa yeelay markii aan diyaar u nahay inaan si dhab ah u qaadno Ilaah, waxaan had iyo jeer horay u helnay aragtida adduunka oo dhammaystiran - mid labadaba ahaa osmotic. (Saamayn) iyo sidoo kale fikirka ula kac ah. Samaynta aragtida adduunka waxay la mid tahay habka ilmuhu u barto afkiisa. Waa howlo rasmi ah, ula kac ah oo cunugga iyo waalidiinta iyo sidoo kale waa geedi socod leh ujeeddooyin aad u muhiim ah nolosha. Intooda badan waxay ku dhacdaa qiimeynno iyo mala awaal dareemaya inay xaq noo yihiin maxaa yeelay waxay noqdaan aasaaska aan ka shaqeyno qiimeeyaan (si miyir iyo miyirba leh) waxa ka socda iyo hareeraheenna. Waa falcelinta miyir-qabka ah ee had iyo goor noqota caqabadda ugu adag ee ku saabsan korniinkayaga iyo markhaatigayagii ahaan Ciise.
Xiriirka aan la leenahay dhaqanka aadanaha
Qorniinku wuxuu nooga digayaa in dhammaan dhaqammada aadanaha ay yihiin, ilaa xad, inay ka baxaan qiyamka iyo qaababka Boqortooyada Ilaah. Annaga oo ah Masiixiyiin ayaa naloogu yeedhay inaan diidno qiyamkaas iyo qaabab nololeedyada sida Safiiro Boqortooyadii Ilaah. Qorniinku wuxuu badanaa u adeegsadaa erayga Baabuloon inuu ku sharaxo dhaqamada cadawga Eebbe uugu yeedhi jiray "hooyada ... waxyaalaha karaahiyada ah ee dunida oo dhan" (Muujintii 17,5 Tarjumaadda New Geneva) waxayna nagu dhiirigelineysaa inaan qaadno dhammaan qiyammada aan ilaahnimada lahayn iyo dhaqammada ku xeeran In la diido (adduunka). Fiiro u yeelo waxa Rasuul Bawlos ku qoray tan: “Mar dambe ha raacina jaangooyooyinkan dunidan, laakiinse baro inaad uga fikirto qaab cusub si laguu beddesho oo aad u xukuntid in wax Ilaah yahay iyo in kale bal inuu Ilaah ku farxo iyo inuu hagaagsan yahay " (Rooma 12,2 Tarjubaadda New Geneva).
Iska jir kuwa doonaya inay kugu khiyaaniyaan fal madhan, falsafad khiyaano ah, iyo aragtiyo asal ahaan ka soo jeeda aadanaha, halkaas oo wax walbaa ku qotomaan mabaadii'da adduunkan xukunta, ee aan ahayn Masiixa. (Kolosay 2,8 Tarjumaadda New Geneva).
Waxay muhiim u tahay wicitaankeenna asxaab ahaan Ciise waa baahida loo qabo in lagu noolaado dhaqano ka soo hor-jeeda - marka la barbar dhigo astaamaha dembiga leh ee dhaqanka nagu xeeran. Waxaa la sheegay in Ciise ku noolaa dhaqankii Yuhuudda isagoo leh hal cag oo uu si adag ugu xidhnaa qiyamka Boqortooyada Eebbe lugta kale. Wuxuu inta badan diidaan dhaqanka si uusan u qabsan fikradaha iyo dhaqammada ay aflagaadeeyaan Eebbe. Si kastaba ha noqotee, Ciise uma diidin dadka dhaqankan ku dhex jira. Taas bedelkeeda, wuu jeclaa iyaga, wuuna u naxariistay. In kasta oo uu muujiyey dhinacyada dhaqanka ee ka soo horjeedda dariiqooyinka Ilaah, waxa uu sidoo kale carrabka ku adkeeyay dhinacyo wanaagsan - dhab ahaantii, dhaqammada oo dhami waa labada isku dhafan.
Waxaa naloogu yeeray inaan raacno tusaalaha Ciise. Sayidkeenna soo sara kiciyey ee la korayna wuxuu naga rajeynayaa inaan si ikhtiyaar ah ugu gudbino hanashada eraygiisa iyo ruuxiisa sida safiirrada aaminka ah ee boqortooyadiisa jacaylka ah, waxaan u sii dayn karnaa iftiinka ammaanta sharaftiisa adduun mugdi ah.
Iska ilaali sanamyada
Si aan ugu noolaano safiiro adduunka ah oo dhaqamadooda kala duwan leh, waxaan raacaynaa tusaalaha Ciise. Waxaan si joogto ah ula soconaa dembiga qotada dheer ee dhaqanka aadanaha - taasi waa dhibaatada ka dambeysa dhibaatada aragtida adduunka. Dhibaatadaani, Dembigani waa sanam caabudid. Waa xaqiiqo murugo leh in sanam caabudku ku baahsan yahay dhaqankeenna reer galbeedka casriga ah, ee is-ku tiirsan. Waxaan ubaahanahay indho indheer garad ah si aan u aragno xaqiiqadan - adduunweynaha nagu xeeran iyo aragtideena adduunyada. Arrrinta tani waa caqabad maxaa yeelay sanam caabudku had iyo goor ma ahan wax sahlan in la arko.
Sanam caabudaaddu waa cibaadada wax aan Ilaah ahayn. Waxay ku saabsan tahay jacayl, aaminaad, iyo u adeegid shay ama qof ka badan Ilaah. Kitaabka oo dhan, waxaan ka helnaa Ilaah iyo hanuuninno cibaado leh oo dadka ka caawiya inay gartaan sanam caabudidda ka dibna iska daa. Tusaale ahaan, Tobanka Amar waxay ku bilaabmayaan mamnuuc in sanam caabuda. Buugga Garsoorayaasha iyo Buugaagta nebiyada ayaa ka warbixinaya sida dhibaatooyinka bulsho, siyaasadeed, iyo dhaqaale ay u dhacaan dadka ku kalsoon qof ama wax aan Ilaaha runta ah ahayn.
Dembiga ugu weyn ee ka dambeeya dembiyada kale oo dhan waa sanam caabudidda - oo ka fogaanaya jacaylka Ilaah, addeeca isaga iyo u adeegidda isaga. Siduu Rasuul Bawlos u sheegay, natiijooyinka waa wax laga xumaado: "In kastoo ay wixii Ilaah ka ogaayeen, ay isaga siin waayeen sharaftii uu u mudnaa oo ay ugu abaal gudeen. Waxay ku nafwaayeen fikirrada aan caqliga lahayn iyo quluubtooda. Oo kii waxgarasho u baahan ayaa gudcur noqotay, laakiin ammaanta Ilaaha aan tabar lahayn ayaa beddelay sanamyo ... Sidaa darteed Ilaah wuxuu ugu daayay damacyada qalbigooda, Oo ugudbay sinadoodii, si ay jidhkooda isu nijaaseeyaan " (Rooma 1,21:23; 24; tarjumaadda Geneva). Bawlos wuxuu muujinayaa in diyaar-garowga aqbalaadda Ilaah ee ah Ilaaha runta ahi ay horseeddo anshaxdarro, musuqmaasuq xagga ruuxa ah iyo mugdi qalbiga ah.
Qof kasta oo xiiseynaya inuu wax ka beddelo aragtidiisa adduunka waxay ku fiicnaan lahayd inuu barto Rooma 1,16: 32, halkaas oo uu Rasuul Bawlos caddeeyay inay ka hor imaanayso sanam caabudidda (dhibaatada ka dambeysa dhibaatada) waa in wax laga qabtaa haddii aan rabno inaan sii wadno soosaaridda miro wanaagsan (go'aanno xariif ah samee si anshax ahaan u dhaqmo). Bawlos wali waa mid iswaafaqsan oo ku saabsan mawduucaan wasaaraddiisa oo dhan (Eeg, tusaale ahaan, 1 Korintos 10,14, halkaas oo Bawlos uu Masiixiyiinta kula boorinayo inay ka cararaan sanam caabudka).
Marka la eego in sanam caabudku ku dhexbaxayo dhaqamada reer galbeedka casriga ah, waxaa muhiim ah inaan ka caawino xubnaheena inay fahmaan halista ay wajahayaan. Waxaa nalaga rabaa inaan ka tarjunno fahamkan jiilka aan xasilloonayn ee quseeya sanam caabudka oo keliya arrimaha u sujuudaya waxyaalaha jidhka. Sanamku sanamku waa ka badan yahay intaas!
Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in yeedhitaankeenna hoggaamiyeyaasha kaniisaddu aysan ahayn inay si joogto ah dadka u tilmaanno waxa saxda ah ee sanam caabudku ku yahay dhaqankooda iyo fakarkooda. Waa masuuliyadaada inaad raadiso naftaada. Taa bedelkeed, sidii caawiyayaal farxadooda, waxaa naloogu yeedhay inaan ka caawinno inay gartaan dabeecadaha iyo dabeecadaha calaamadaha u ah xiriirka sanamyada. Waxaan u baahan nahay inaan ka wargalno halista ku jirta sanam caabudaada iyo inaan siinno shuruudaha kitaabiga ah si ay dib ugu eegaan fikradaha iyo qiyamka ka soo baxa aragtidooda adduunka si ay u go'aamiyaan haddii ay la jaan qaadayaan caqiiddada Masiixiyiinta ee ay ku doodayaan.
Bawlos wuxuu ku bixiyay tilmaam noocan ah warqaddiisa kaniisadda ku taal Kolossä. Wuxuu wax ka qoray xidhiidhka ka dhexeeya sanamyada iyo hunguri (Kolosay 3,5 Tarjumaadda New Geneva). Haddii aan rabno inaan lahaano wax aad u badan oo aan damacno, waxay ku guuleysatay quluubteenna - waxay noqotay sanam aan ku dayno, oo aan ku xakameyno wuxuu Ilaahay mudan yahay. Waqtigayaga waqtigan xaadirka ah ee xooga badan iyo cunista, waxaan dhamaanteen u baahanahay caawimaad si aan ula dagaallano damaca hunguriga u horseeday sanam caabudidda. Dunida oo dhan ee xayeysiinta waxaa loogu talagalay inay na dhex geliso qanacsanaanta nolosha ilaa aan ka iibsano sheyga ama aan ku qanacno qaab nololeedka xayeysiinta. Waxay u eg tahay in qof goaansaday inuu abuuro dhaqan taas oo carqaladeynaysa waxa Bawlos Timothy ku yidhi:
"Laakiin cibaadadu waa faa iido weyn oo loogu talagalay kuwa qancin kara. Sababtoo ah adduunka wax umaanaan keenin, taas aawadeed wax uun uma soo bixin karno. Laakiin haddaan haysanno cunno iyo dhar, waxaan dooneynaa inaan ku qanacno Waxaan jeclaan lahaa inaad taajir noqotid, oo isku dhacaan jirrabaadda iyo murugada iyo damacyo badan oo nacasnimo iyo waxyeello leh, kuwaas oo dadka u oggolaada inay halligaan oo damcaan, xanuun badan " (1 Timoteyos 6,6: 10).
Qayb ka mid ah wicitaankeenna annagoo ah hoggaamiyeyaasha kiniisadda ayaa ah inaan ka caawino xubnaheena inay fahmaan sida dhaqanku ugu qanacsan yahay qalbigeenna. Kaliya ma abuurto damacyo xoog leh, laakiin sidoo kale dareen damac iyo xitaa fikirka ah inaannaan ahayn qof qiimo leh haddii aan diidno sheyga la xayeysiiyay ama qaab nololeedkiisa. Waxa gaarka ah ee ku saabsan hawshan waxbarashadu waa inta ugu badan ee aan sanamyada u samaysanno waa waxyaalo wanaagsan. Isaga laftiisa, waxaa wanaagsan in la helo guri wanaagsan iyo shaqo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, markay noqdaan wax go'aamiya aqoonsigeenna, micnaheena, nabadgeliyada iyo / ama sharafteenna, waxaan u oggolaanay sanam noo soo gala nolosheena. Waa muhiim inaan ka caawino xubnaheena inay fahmaan marka xiriirkoodu uu noqday wax wanaagsan oo sanam caabuda.
Aqoonsiga sanam caabudku inuu yahay dhibaatada ka dambeysa dhibaatada waxay dadka ka caawineysaa inay dejiso tilmaamaha noloshooda si ay u ogaadaan goorta wax wanaagsan la qaadanayo oo ay ka dhigaan sanam - wax ay la xiriiraan marka la eego xagga nabadda, farxadda, uga tag macno shaqsiyeed iyo amaan. Kuwani waa waxyaalo Ilaah kaliya runtii bixin karo. Waxyaabaha wanaagsan ee dadka u rogi kara "waxyaabaha ugu dambeeya" waxaa ka mid ah xiriirka, lacagta, caannimada, fikradaha, waddaniyadda, iyo xitaa cibaadada shaqsiyeed. Baybalku waxaa ka buuxa sheekooyin ku saabsan dadka sidan sameeya.
Sanamyada sanadaha aqoonta
Waxaan ku nool nahay waxa taariikhyahanadu ugu yeedhaan da'da aqoonta (si ka duwan da'da warshadaha ee waagii hore). Maalmaheena maanta, sanam caabudku sanamku wuxuu ka yar yahay caabudista shey ahaaneed oo jirka ah laakiin wuxuu ka caabudaa fikradaha iyo aqoonta. Qaababka aqoonta ee inta badan isku dayda inay ku guuleystaan ​​qalbiyadeenna waa fikir - moodello dhaqaale, aragtiyo nafsi ah, falsafad siyaasadeed, iwm. Annaga oo ah hoggaamiyeyaasha kaniisadda, waxaan uga tagnaa dadka Ilaahay kuwo jilicsan haddii aanaan ka caawinin inay horumariyaan awoodda is-lahaanshaha xukumaan markii fikrad wanaagsan ama falsafad ay noqoneyso sanam qalbigooda iyo maskaxdooda.
Waxaan ka caawin karnaa iyaga tababar ahaan sidii ay u aqoonsan lahaayeen qiimahooda ugu weyn iyo fikradahooda - aragtidooda adduunka. Waxaan bari karnaa sida loo aqoonsado salaadda, sababta ay si xoog leh uga falceliyaan wax ku saabsan wararka ama warbaahinta bulshada. Waxaan ka caawin karnaa inay weydiiyaan su'aalahan oo kale: Maxaan u xanaaqay? Maxaan ugu dareemayaa si xoog leh? Waa maxay qiimaha tan iyo goorma iyo sidee ayay qiimo ii noqotay? Falcelintaydu miyey Ilaah siisa ammaanta isla markaana muujisaa jacaylka iyo naxariista Ciise ee dadka?
Sidoo kale ogsoonow in annaga qudheennu aan ka warqabinno "sacyada muqaddaska ah" ee ku jira qalbiyadeena iyo maskaxdeena - fikradaha, dabeecadaha, iyo waxyaabaha aan Ilaah dooneynin inuu taabto, waxyaabaha ah "taboo". Annaga oo ah hoggaamiyeyaasha kiniisadda, waxaan Ilaah ka baryeynaa inuu dib-u-habayn ku sameeyo aragtidayada adduunka si waxa aan dhahno iyo wax u dhalaan ay midho ugu dhex dhalayaan boqortooyada Ilaah.
Qaar badan oo ka mid ah marin-habaabeenna Masiixiyiinta ayaa salka ku haya saameynta aan badanaa la-ogaan ee aragtidayada shakhsi ahaaneed. Mid ka mid ah saameynta ugu waxyeelada badan ayaa ah hoos u dhaca tayada markhaatiyaasheena Masiixiyiinta ah ee adduun dhaawacan. Inta badan waxaan ula tacaalnaa arrimaha degdegga hab ka tarjumaya aragtida dhinacyada kala duwan ee dhaqanka cilmaani ee nagu xeeran. Sidaas darteed, inbadan oo naga mid ah ayaa diidan in wax laga qabto dhibaatooyinka dhaqankeenna ka jira, taasoo xubnahayaga ka dhigaysa kuwo nugul. Waxaan ku leenahay Masiixa inuu dadkiisa ka caawiyo sidii ay u aqoonsan lahaayeen habka aragtidooda adduunku u noqon karo goobta taranka ee fikradaha iyo dhaqamada xushmeeya Masiixa. Waa inaan ka caawino xubnaheena sidii ay u qiimeyn lahaayeen fikradaha qalbigooda marka la eego amarka Masiixa ee ah inay Ilaah jeclaadaan waxkasta. Tan macnaheedu waa inay bartaan inay aqoonsadaan dhammaan cibaadada sanamyada isla markaana ay ka fogaadaan.
waxaa qoray Charles Fleming